Google Muzzles 'Is-u adeegid' Qaybaha Dib u eegis | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Google Muzzles 'Is-u-adeegid' Qaybaha Dib-u-eegida
Google Muzzles 'Is-u-adeegid' Qaybaha Dib-u-eegida
Algorithm-ka cusub, Google waxaa go'aamiyay in uu ka saaro dib u eegista "is-u-adeegsiga" ee qaybo qani ah oo natiijooyinka raadinta ah. Waad ku mahadsan tahay shirkadaha ecommerce, dib u eegista alaabta dhaqameed ee bogga alaabta waa in aan la saameynin.
Google ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqday hagitaan ku saabsan noocyada macluumaadka ee kicin kara dib u eegista qani-goysyada iyo sida loo calaamadiyo faallooyinka si loogu qalmo. Kahor intaanan u gelin guntimaha algoorithmiyaha cusub, in kastoo, aynu dib u eegno qaybo qani ah iyo xogta habaysan.
Goos gooska hodanka ah
Qaybo qani ah waa qayb ka mid ah liisaska raadinta organic ka baxsan isku xirka buluuga ah ee caadiga ah oo ay ku xigto dhawr sadar oo qoraal ah. Goobaha ecommerce-ka waxay u muuqdaan inay dabin ku sameeyaan qaybo qani ah oo dib u eegista, qiimaha, helitaanka, sitelinks, iyo rootiga, iyo noocyada kale.
Qaybo qani ah - sida xiddigaha orange-ka ee dib u eegista - kaliya waxay ka muuqdaan natiijada raadinta dabiiciga ah marka HTML-ka hoose ee boggaas lagu calaamadeeyay xog habaysan.
Qaybaha hodanka ah waxay ka muuqdaan kaliya natiijooyinka raadinta dabiiciga ah marka HTML-ka hoose ee boggaas lagu calaamadeeyay xog habaysan. Tusaalahan yar yar ee qani ah waa dib u eegista alaabta ee kabaha. Riix image si aad u ballaadhiso.
Tusaale ahaan, sawirka kore ee calaamadda 1 wuxuu muujinayaa in bogga badeecada ee Rothy's Black Solid, dabaqyada lugaha leh ee lugaha leh ay soo aruuriyeen 2,617 dib u eegis oo isu geeyey 4.6 xiddigood. 2 ayaa tilmaamaysa qayb ka mid ah koodhka isha HTML ee bogga, kaas oo ka kooban xogta habaysan ee ka dhigaysa xogta dib u eegista si fudud loogu isticmaalo bots search engine. Calaamadda 3 waxay tilmaamaysaa sida Google-ku u muujiyo macluumaadka sida xiddigaha liimiga ah iyo qoraalka cawl ee dib u eegista qani ah
Si loo hagaajiyo mashiinka raadinta, xogta habaysan waa macluumaadka qaab gaar ah, mashiinka-akhrisan karo oo raacaya heerka lagu dejiyay Schema.org. Heerarkani wuxuu qeexayaa noocyada macluumaadka ee xogta habaysan ay qeexayso, sida alaabta, dhacdo, ama cunto karinta.
Xogta habaysan ee la mid ah xogta habaysan ee dib u eegista lagu muujiyay sawirka kore ayaa mas'uul ka ah kicinta qaybo kale oo qani ah, iyo sidoo kale wargelinta sifooyin raadinta ballaaran, sida xiriirada shirkadaha, sida loo sameeyo baallooyinka, iyo carousels-ka-cuntada.
Algorithm-ka cusub ee Google ee liisaska u qalma in la helo dib u eegisyo qani ah ayaa diiradda saaraya boggaga:
Isticmaal xogta habaysan oo ah nooc schema ah oo u qalma;
Ku dar magaca hanti;
Waxa ku jira dib u eegisyo aan ahayn kuwo dano gaar ah laga leeyahay
Aqoonta Xogta Habaysan
Labada shuruudood ee hore ee kor ku xusan waxay ku salaysan yihiin xog habaysan. Kaliya xogta habaysan ee noocyada schema qaarkood ayaa loo ogolyahay in ay kiciyaan dib u eegista qaybo qani ah.
Markii hore, waxaad ku lifaaqi kartaa calaamadaynta dib u eegista nooc kasta oo schema ah. Tusaale ahaan, waxaad ku lifaaqi kartaa calaamadaynta dib u eegista Language nooca schema haddii aad rabto inaad qorto, dheh, qoraal ku saabsan dareenkaaga luqadda Ingiriisiga. Hadda Google wuxuu qeexayaa 17 nooc oo schema ah oo ay ka fiirsan doonto inay u soo saarto dib u eegista qaybo qani ah, oo ay ku jiraan Product, Book, Ganacsiga deegaanka, Recipe, Iyo Ururka.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ku darto magaca hantida dib u eegistaada xogta habaysan si aad u qeexdo magaca shayga dib loo eegayo.
Dib u eegisyada is-adeegga
Midda ugu xun ee saddexda xaaladood ee kor ku taxan, Google waxa ay aqoonsatay noocyo dib u eegis ah oo ay u aragto "iska-u-adeegsiga." Google mar dambe kuma dari doono dib u eegistan natiijooyinka raadinta sida qaybo qani ah.
Google wuxuu yiri: "Waxaan u yeernaa dib u eegista 'iskaa-u-adeegsiga' marka dib-u-eegis ku saabsan cidda A la dhigo bogga hay'adda A - si toos ah calaamadahooda ama iyada oo loo marayo aaladda qaybta 3aad ee guntan."
Google waxa ay ku adkaysanaysaa in joogitaanka noocyada qaar ee dib u eegista isticmaalaya Ganacsiga deegaanka iyo Ururka Noocyada schema ee goobta waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan ​​shirkadda halkii ay ka faa'iideysan lahaayeen macaamilka. Sababtoo ah dib u eegisyada iskaa wax u qabsiga ah maaha kuwo udub dhexaad u ah macaamiisha, Google uma soo jeedin doonto dareenka bogaggan natiijooyinka raadinta inay yihiin qaybo qani ah.
Tusaale ahaan, dhajinta bogga dib u eegista macaamiisha ee ka hadlaya faa'iidooyinka la shaqaynta guud ahaan shirkaddaada waxay suurtogal u noqon kartaa in ay u qalanto sida Google-ka. Si kastaba ha ahaatee, dib u eegista alaabta dhaqameed ee bogga alaabta ayaa lagu calaamadeeyay iyadoo la isticmaalayo Product nooca schema - Google malaha uma tixgelin doono dib u eegistaas inay yihiin kuwo iskaa u adeega.
Mainline Menswear boggiisa markhaatiga waxa uu abuuraa dib u eegis qani ah oo ku saabsan natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ee Google. Riix image si aad u ballaadhiso.
Sawirka sare waxa uu tusinayaa bogga dib u eegista ee Menswearka Mainline. Dib u eegisyada waxa laga keenay iibiye qolo saddexaad ah oo ururisa oo muujisa dib u eegisyada waxqabadka shirkadda. Google waxa laga yaabaa inay u tixgeliso dib u eegista boggan inay tahay mid iskaa u adeegaysa. Xitaa haddii xogta xiddigaha ee lagu tilmaamay calaamadda koowaad lagu calaamadeeyay iyadoo la isticmaalayo Ganacsiga deegaanka or Ururka Nooca schema, Algorithmamka Google ayaa laga yaabaa inuu go'aamiyo inaanu muujinin dib u eegis qani ah natiijada raadinta boggan.
Si loo jahawareeriyo arrimaha xitaa, iibiyaha qolo saddexaad, sida eKomi, oo ururisa dib u eegista ku saabsan shirkadaha kale waxay u qalmi kartaa dib u eegista qani ku ah raadinta magaca shirkadda, ilaa iyo inta ay isticmaalayso Ganacsiga deegaanka or Ururka nooca schema.
Natiijooyinka raadinta eKomi ee Mainline Menswear waxay soo bandhigaysaa dib u eegis qani ah. Riix image si aad u ballaadhiso.
Calaamadda 1 ee tusaalaha sare, bogga eKomi waxa uu isu geeyaa dib u eegis loogu talagalay Menswear Mainline oo uu ku calaamadiyay dib u eegistaas xog habaysan. Calaamadda 2 waxay tilmaamaysaa dib u eegista qaninimada leh ee Google-ka ee dadaalka eKomi.
Markaa shirkad lafteedu ma qiimayn karto dib-u-eegis qani ah, laakiin shirkad kale oo soo ururisa dib u eegistaas ayaa awood u leh. Farqiga ayaa ah in shirkadda martigelinaysa dib u eegista aysan la mid noqon karin tan shirkadda dib loo eegayo.
Xitaa isbeddeladan, dib u eegista qani ku ah qaybo ka mid ah waxay sii wadaan inay ka faa'iidaystaan ​​shirkadaha ecommerce. Soo jiidashada muuqaalka degdega ah ee xiddigaha orange-ka ayaa ka dhigaya ka boodka Google-ka mid qiimo leh. Sii wad inaad calaamadiso xogta alaabtaada - gaar ahaan dib u eegista alaabtaada - xogta habaysan ee ku jirta Product nooca schema, iyo natiijooyinka raadintaadu waxay xaq u yeelan doonaan inay soo bandhigaan qaybo qani ah oo dib u eegista ah.
Si kastaba ha noqotee, shirkadaha ecommerce waa inay dib u eegaan calaamadaynta boggaga go'an ee dib u eegista kuwaas oo diiradda saaraya guud ahaan shirkadda. Haddii kale, waxaa jirta fursad wanaagsan in Google uu go'aamiyo dib u eegistaas inay yihiin kuwo iskaa wax u qabso ah oo aan ku dari doonin sida qaybo qani ah natiijooyinka raadinta.
13 Beddelka Google Analytics ugu Wanaagsan ee Ururinta Xogta Awooda leh
10-ka ugu Fiican ee WordPress FAQ Plugins ( Sida loo abuuro Qaybta FAQ gacanta)